Heegan oo ku dhawaaqday kabtankeeda rasmiga ah kadib bixitaanka Catoosh – Gool FM
Shaxda rasmiga ah ee kulanka caawa kooxaha Alavés vs Barcelona oo la shaaciyey … (Lionel Messi oo…)
Cristiano Ronaldo oo labo saaxiibadiisii hore ee Real Madrid ah u soo jiidaya dhanka Kooxda Juventus
Macallin Ole Gunnar Solskjær iyo Kooxda Man United oo xilli ciyaareedka soo socda soo wata lix ciyaaryahan oo tayo sare leh
RASMI: Macallin Pep Guardiola oo xaqiijiyey in Kevin De Bruyne uu seegi doono kulanka Manchester derby
Atletico Madrid oo diyaar u ah inay Antoine Griezmann ka iibiso Barcelona haddii ay heleyso 19-sano jir ka tirsan kooxda…
MAANTA OO KALE: Goolkii 500-aad ee Lionel Messi u dhaliyey Barcelona, rikoorkii ay sameysay kooxda Arsenal & Saddexleeydii uu Ronaldo ugu shubay Man United!
Juventus oo weerar ku ah kooxo ay ka mid yihiin Real Madrid, Man United iyo Roma kaddib marka uu furmo suuqa xagaaga ee soo socda
Heegan oo ku dhawaaqday kabtankeeda rasmiga ah kadib bixitaanka Catoosh
Dajiye September 12, 2018
(Soomaaliya) 12 Sept 2018. Kooxda kubadda cagta Heegan ayaa ku dhawaaqaday kabtankeeda rasmiga ee hogaamin doona fasal ciyaareedka 2018-19, kadib bixintaakii Cabdicasiis Catoosh.
Heegan ayaa si rasmi ah ugu dhiibtay calaamada xushmada ee kabtanimo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Cumar Qaxtaani, kaa oo kamid ah xidigaha ugu muhiimsan kooxdan.
Xidigan ayaa ku sugan kooxda ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Heegan mudo afar sano isagona kula soo guuleystay kooxdan horyaalka Somali Premier League sanad ciyaareedkii 2014-15 sido kale wuxuu la hantay koobab munaasabado.
Cumar Qaxtaani ayaa ku soo ifbaxay tartanka degmooyinka sanadkii 2014-kii markaas oo u ciyaarayay xulka degmada Xamar Weyne, waxaana xusid mudan inuu kula guuleystay tartanka degmooyinka gobolka Banaadir.
Kadib Tartanka degmooyinka waxaa heshiis la gashay kooxda haatan uu ku sugan yahay Heegan, isago ahaa sanadkii la soo dhaafay kabtanka 2-aad kooxdan.
Yeelkeede Heegan ayaa sanadkan waxaa hogaamin doona ciyaaryahan Cumar Qaxtaani.
Pogba oo sababtaan darteed u niyad jabinaya kooxdiisii hore ee Juventus
Barcelona oo heshiis cusub ku abaal marinaysa Jordi Alba
Sergio Busquets oo shaaciyey horyaalka uu ku biiri doono marka uu ka tago kooxda Barcelona https://t.co/2hLD1N3JhJ
Juventus oo kooxaha Tottenham iyo Man United kula tartamaysa laacib ka dheela Premier League… (Waa kee?) https://t.co/PkfLCTaLpz
Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii Chelsea barbaraha la dhaafi weysay kooxda Burnley https://t.co/ctqeY9xw26